Marka uu Macalinku noqdo horseedka is-baddalka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Marka uu Macalinku noqdo horseedka is-baddalka.
Posted by: radio himilo April 4, 2017
Muqdisho – Gudaha dal ay dagaalladu la dageen – halkaas oo carruur badan aysan heli karin xaqii wax-barashada – macalin iskuul ayaa isku dayaya tiisa ugu fiican si uu is-baddal u sameeyo. Saber Hosseini, kaas oo magaalada Bamiyan ee bartamaha dalka Afghanistan carruurta wax ku bara ayaa baaskiilkiisa ka dhigay maktabad socoto ah oo uu la aado carruurta ku sugan meelaha fog.
Previous: Ronaldo: “Sababtii aan u xirtay maaliyadda nambar 7.”
Next: Ball’s Pyramid – Buurta ku dhex-taal Badda Pacific-ga